March 2013 | IT Sharing Network
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.. ကွန်ပျူတာမှာ ဝင်ရောက်လာတဲ့ Virus တွေကြောင့် Windows တက်ဖို့တောင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်စေ Virus ကြောင့် ကွန်ပျူတာ ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေမှာ Kaspersky Rescue Disk ကိုအသုံးပြုပြီး Boot ထဲမှတဆင့် Malware နဲ့ Virus တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်.. အရင်ဆုံး download မှရလာတဲ့ ဖိုင်လေးကို Iso File လုံပြီး CD ခွေနဲ့ burn လိုက်ပါ အသုံးမလိုသေးရင်တော့ အခွေလေးကို သိမ်းထားလိုက်ပေါ့... လိုအပ်လို့သုံးမယ်ဆိုတော့မှ Burn ထားတဲ့ CD ခွေလေးကို ထည့်လိုက်ပြီး ကွန်ပျူတာကို Restart ချပေးလိုက်ပါ... Boot တက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ Windows တင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်းပဲ လုပ်ပေးရ မှာဖြစ်ပါတယ်... Keyboard မှ Key တစ်ခုခုကိုနှိပ် ဖို့ပြောပါလိမ့်မယ် မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ Key လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ.. ပြီးရင် Language ရွေးပြီး accept the agreement လုပ်ရန် 1 ကိုနှိပ်ပါက kaspersky Rescue disk ထဲသို့ ရောက်ပါပြီ... မိမိသုံလိုတဲ့ Mode ကိုရွေးပြီး Boot System ထဲမှာ Partation တစ်ခုချင်းဆီကို Scan ဖတ်ပြီး ကွန်ပျူတာထဲကိုဝင်ရောက်နေတဲ့ Mailware တွေနဲ့ Virus တွေကိုရှင်း လင်းနိုင်ပါမယ်...
How to create new partition in External Hard Disk (မြန်မာလို)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... External Hard Disk ပေါ်မှာ Partition ခွဲတဲ့နည်းလေးကို အသေးစိပ်ရှင်းပြထားတဲ့ How to create new partition in External Hard Disk ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... မိမိကွန်ပျူတာမှာ ပါလာတဲ့ Hard Disk က ဒေတာသိုလှောင်မှုဂစ် နည်းနေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ External Hard Disk ကို ၀ယ်ပြီတော့ Aသုံးပြုကြပါတယ် ။ အလို External Hard Disk ကိုဝယ်လာ အတဲ့အခါမျိုးမှာ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိန်ဆက်ပြီးတော့ ပါတေးရှင်းတွေကို ကိုယ်လိုသလို ဘယ်လိုခွဲမယ်ဆိုတာ အခုကျွန်တော် ပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သိပြီးသား သူများအတွက် ရီစရာ သဖွယ် ဖြစ်နေပေမယ့် ။ မသိသေးသူများ အတွက် ကျွန်တော် ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
ကျွန်တော်လည်း သူငယ်ချင်းများအတွက် အသစ်အသစ်ကလေးတွေ ကိုတင်ပေးချင်တာနဲ့ဟိုရှာဒီရှာနဲ့ ဒါလေးသွားတွေ့လို့ အသစ်ကလေးပဲဆိုပြီး တင်ပေးဖြစ်သွားတာပါ။
ဖုန်းတွေမှာတင် root လုပ်လို့အားမရလို့ Camera ကို root လုပ်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိ wifi မှာ ဘယ်သူတွေ ၀င်သုံးနေလည်းဆိုတာ ဖမ်းမယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... မိမိ Wifi မှာဘယ်သူတွေဝင်သုံးနေလည်းဆိုတာကို အလွယ်လေး သိနိုင်ဖို့အတွက် Wireless Network Watcher v1.42 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... တောင်းထားတဲ့ အကိုအတွက် ဖိုင်ဆိုက်ကလည်းသေးပြီး သုံးရတာ အရမ်းလွယ်လွန်းလို့ ဒါလေးပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... Click တစ်ချက်နှိပ်ယုံနဲ့ ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း မိမိ Router နှင့် ကွန်ပျူတာကို ပြသည့်အပြင် ဘယ်ကွန်ပျူတာက ဘယ် IP ၊ ဘယ် MAC နဲ့ ချိတ်သုံးနေလည်း ဘယ် ဖုန်းက ဘယ် IP ၊ ဘယ် MAC နဲ့ ၀င်သမနေလည်းဆိုတာကို ဖွင့်လိုက်ယုံနဲ့ တန်းသိနိုင်ပါတယ်... ဒါလေးဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်...
Run box မှာ ရိုက်နိုင်သော Command များကို ကျွန်တော်သိထားသလောက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မောက်နဲ့ ဟိုထဲသွားဖွင့် ဒီထဲသွားဖွင့်နဲ့ အလုပ်လည်းနဲနဲရှုပ်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ သွားချင်နဲ့နေရာကို run box ထဲကနေ command လေးတွေရိုက်ပြီး ဖွင့်ရာတာ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ မသုံးမလိုလည်း ဗဟုသုတလေးအနေနဲ့ မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင် ကျန်တာတွေ ရှိရင်လည်းနားလည်ပေးပါ သိသလောက်ကလေး ပြန်လည်မျှဝေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ CCleaner 4.00.4064 Professional Retail ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Install မလုပ်ခင် Internet ကိုဖြုတ်ထားပေးရပါမယ်... Crack , Patch သုံးစရာမလိုပါဘူး Register လုပ်ဖို့ User Name နှင့် License Key ပါဝင်ပါတယ်.... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
Kaspersky Internet Security(2013) 100% WORKING KEYS 365 days
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Kaspersky Internet Security(2013) 100% WORKING KEYS 365 days ရမယ့် ကီးအသစ်လေးတွေ့လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... 1 နှစ်စာဆိုတော့ မဆိုးဘူးပေါ့... Kaspersky Internet Security 2012 (76.42MB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Software ပါဒေါင်းယူနိုင်အောင် လင့်ခွဲထည့်ပေးထားပါတယ်...
ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ မိမိ ကွန်ပျူတာက cpu က နဲနဲနိမ့်နေလို့ မျက်နှာ ငယ်နေရတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် သူများတွေ အထင်ကြီးအောင် ကြွားနည်းလေးပါ။ တစ်နေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မေးလို့ သတိရတာနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။ တစ်လောကလဲ ကြားမိလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်မှာ နိုင်ငံခြားသားဟန်ဆောင်ပြီး ကွန်ပျူတာလိမ်ရောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေး ကိုသတိရတာလဲပါပါတယ်။ ၀ယ်ပြီးမှ ကွန်ပျူတာ က cpu က အနိမ့်ကြီးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ။ သူများကိုလ်ိမ်ရောင်းဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး ဗဟုသုတအနေနဲ့တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Kaspersky Daily Activation Keys 30.3.2013 + Kaspersky Daily Activation Keys 2.2.2013 + Kaspersky Internet Security 2013 + 2012
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Kaspar Key အသစ်လေးတွေ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ကီးထည့်ပုံကိုလည်း အောက်မှာပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... Kaspersky Internet Security 2012 (76.42MB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox Download Minus download အဆင်ပြေတဲ့လင့်က ယူနိုင်ပါတယ် ... Kaspersky Internet Security 2013 v13.0.0.3370 + key + activation (142.6 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Anti-Virus 2013 + key + activation (134 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Key ထည့်နည်း ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... kasparsky offline update လုပ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ Update ဖိုင်များကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်... kasparsky ofline update လုပ်နည်း (မြန်မာ) 1.0 MB ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... ယခု Kaspersky Keys for All Product Kaspersky ကို Sharebeast မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... သန်းထိုက်(ရွေရိပ်) ရေးသားပြုစုထားတဲ့ idevice များအတွက် လက်တွေ့သုံး နည်းပညာ စာအုပ်ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... နည်းပညာဆိုက်တိုင်းသာမက အခြားစာအုပ်မျှဝေတဲ့ ဆိုက်တွေမှာလည်း ရှိပါတယ်... လေ့လာလိုသူများ အဆင်ပြေစေရန်နှင့် စာအုပ်မရောက်ရှိတဲ့ နေရာ ၀ယ်ယူရန်မလွယ်ကူတဲ့ နေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အဆင်ပြေစေရန် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
Malware ရှင်းလင်းပေးတဲ့နေရာမှာ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးနဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတော်တော်လေးကောင်းမွန်ပြီး အသွင်အပြင်လေးကလဲ လန်းပါတယ်။
malware တွေ နဲ့ spyware တွေကိုအကောင်းဆုံးရှာဖွေရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။malware တွေ spyware ရှင်းလင်းပေးတဲ့နေရာမှာလည်းကွန်ပျူတာထဲက ဆော့ဝဲလ်တွေကို မထိခိုက်အောင် ရှင်းလင်းပေးမှာ။ potential spyware,adware,trojans,keyloggers,bots,worms တို့ရဲ့ ရန်ကလဲ ကာကွယ်ပေးမဲ့ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးမို့ သူငယ်ချင်းများကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အရင်တုန်းကတော့တင်ပေးဘူးပါတယ် internet အသုံးပြုတဲ့အခါ အလွန်မြန်ဆန်တဲ့ browser ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ ခုတင်ပေးထားတာကတော့ maxthon ရဲ့ cloud brower လေးဖြစ်လို့ အသစ်အဆန်းလေး အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ window 8 လို google chrome လို browser ပေါ်မှာ မိမိသုံးချင်တဲ့ app တင်ထားပြီးတော့ အသုံးပြုလို့ရတဲ့အပြင် အသွင်အပြင်လေးကလဲ ဘေးတိုက်ကလေးမို့ အမြင်ဆန်းပါတယ်။အသုံးပြုရတာလည်းတော်တော်လေးမြန်ဆန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မိမိရဲ့ Android ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးပါ။ ဖုန်းထဲကနေအင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ အင်တာနက်လိုင်းလေးလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြည်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။ အင်တာနက် လိုင်းလေးကိုဖွင့် ဆော့ဝဲလ်လေးကိုထပ်ဖွင့်ပြီး လိုင်းလေးကို မြင့်ပေးပြီး
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း Facebook မှာ ကာလာလေးတွေ ပြောင်းတဲ့နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အိမ်ကို အလည်လာတဲ့ ဘော်ဒါက ကျွန်တော် ကလိထားတာလေးမြင်ပြီး လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ရေးဖြစ်သွားတာပါ.... ဒါကတော့ Firefox မှာ addon ထည့်သုံးတဲ့ နည်းပါ Firefox မှာ အသုံးပြုတဲ့ သူတွေအတွက်ပဲ အဆင်ပြေပါမယ်....
Business Cards တွေ ထူးထူးခြားခြား လေးနဲ့ ဒီဇိုင်းလှလှ လေးတွေ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။ မူရင်းဒီဇိုင်းတွေလည်းပါပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများ အသုံးပြုလို့ရအောင် ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။
မူရင်းရေးထားတဲ့စာသားတွေနဲ့ မူရင်းဆိုက်ကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်းက လေးလံနေတာတွေ history , tasks တွေကိုရှင်းလင်ပေးမယ်။ ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ app တွေကို backup လုပ်ပေးမယ်။ uninstall လုပ်ပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ play store မှာ အလကားပေးထားပါတယ်။ ဆိုက်ထဲလာလည်တဲ့သူငယ်ချင်းများ ဒီနေရာမှာပဲ ယူသွားလို့ရအောင် dropbox ကနေ ပြန်လည်ဝေမျှပေးထားပါတယ်။
မှားပျက်မိတဲ့ဖိုင်တွေ အမှိုက်ဗုံးထဲက ဖျက်မိတဲ့ဖိုင်တွေ partation ပိုင်းမိလို့ ပါသွားတဲ့ဖိုင်တွေကို ပြန်လည် ရယူနိုင်မဲ့ recover ဆော့ဝဲလေးပါ ဖိုင်ဆိုက်ကလေးကလည်း သေးပါတယ်။ တော်တော်လေးကောင်းမွန်ပါတယ် အလုပ်လုပ်ပုံလေးကလည်းမြန်ဆန်ပါတယ် အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများနဲ့ ဆောင်ထားလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။ မူရင်းစာသားနဲ့ ဆိုက်ကိုလေ့လာလို့ရအောင်လည်း အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Huawei 4.1.1 No Need Code.. No Need Root …. No Need dload file …. No Need CWM … One Minute Myanmar Font
တီကောင်လေးးးရဲ့လက်စွမ်းေိေိေိ Huawei Version 4.1.1 U8951(G510) , U8833(Y300) ဖုန်းတွေကို
Root လုပ်စရာမလို … dload file မလို .. CWM မလို …
Code မလုပ်ဘဲနဲ့ .. မြန်မာဖေါင့်အလွယ်ဆုံးထည့်မယ်ဗျာ .
..ဆိုင်သမားတွေ အဆင်ပြေ၀မ်းသာကြမှာပါ …
အချိန်တွေ ပိုထွက်လာလို့လိုအပ်တာကတော့ ဒါလေးဘဲဗျ….
ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြောတဲ့ ဖုန်းမော်ဒယ်လ်တွေထဲက ကြိုက်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး Power ဖွင့်ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ
… ပြီးရင် Phone Internal Storage ထဲက HWThemes>> Diy Theme>> ကို ဒေါင်းထားတဲ့ TeeKg.hwt ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးထည့်လိုက်ပါ .
.. ဖုန်းချိတ်ဆက်ထားမူ့ ကို ဖြုတ်လိုက်ပါ ..ပြီးရင် Application ထဲက Theme ထဲမှာကြည့်လိုက်ပါ …
Elegance ဆိုတဲ့ Theme ကိုတွေ့ ပါလိမ့်မယ် … အဲဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါ … အဲဒီမှာ Apply Theme ဆိုပြီးတော့ သူကမေးပါလိမ့်မယ် ..
. Theme with font ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါ … ဖုန်းက သူ့ ဘာသာ ရီစတက်ကျသွားပြီ ပြန်တက်လာလိမ့်မယ် ..
. ပြီးနောက် မြန်မာကီးဘုတ်ထည့်ပြီးရိုက်လို့ ရပါပြီ… တခြား Theme များကို သုံးချင်ပါက သုံးနိူင်ပါတယ် …
ဒါပေမဲ့ တခြား Theme ကိုသုံးရင်တော့ Theme without font ကိုရွေးပေးပါ … အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သူငယ်ချင်းများအတွက် MMSD မှ ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Image Cartoonizer 3.2.2 ( ကာတွန်းပုံလေးတွေ အလွယ်တကူလုပ်ရန်)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... မိမိတို့ ပုံတွေကို ကာတွန်းပုံလေးတွေ ရုပ်ပြောင်ပုံလေးတွေ ဒီဇိုင်းအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတဲ့ Image Cartoonizer 3.2.2 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... အသုံးပြုပုံကလည်း အရမ်းလွယ်ပါတယ် အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့ Patch ပါဝင်ပါတယ်... Patch ခြိုးပြီးလို့ အသုံးပြုတဲ့အခါ Registry Key ထည့်ခိုင်းပါက ရိုက်ချင်ရာရိုက်ထည့်ပြီး Full Version ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် www.cartoonize.net ကို Click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ခုတစ်လော Facebook မှာ အပြန်အလှန်ရှယ်နေကြတဲ့ ပုံလေးတွေကို အလွယ်တကူ လုပ်လို့ရတဲ့ ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အခြားလုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေလည်း အများကြီးပါဝင်ပြီး ပုံလေးကြည့်ယုံနဲ့ အသုံးပြုတတ်မယ် ကြိုက်နှစ်သက်မယ်ထင်ပါတယ်.... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့ Patch ပါဝင်ပြီး အသေးစိပ်သလိုလျှင် http://www.iconempire.com/pixel-editor/index.htm ကို Click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast, Zippyshare နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်...
မိမိကွန်ပျူတာမှာ ရှိနေတဲ့ storage ကို ဆေးကြောသန့်စင်ပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ မိမိအလည်းအပတ်သွားထားတဲ့ web ဆိုက်တွေရဲ့ Link အကြွင်းအကျန်တွေ,temporary file, cookies, delete flash cookies, delet java and microsoft vm logs, မိမိကွန်ပျူတာနဲ့ auto login user name နဲ့ password တွေကိုရှင်းလင်းပေးမှာပါ။ renent , history,prefetch နဲ့ အခြားအသုံးမလိုတော့တဲ့ နေရာစားစေမဲ့ဖိုင်တွေကိုအကောင်းဆုံးရှာဖွေ ရှင်းလင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအားလုံး full version လေးအသုံးပြုလို့ရအောင် crack ဖိုင်လေးလဲ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ မူရင်းဆိုက်က စာသားနဲ့ မူရင်းဆိုက်ကိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အရေးကြီးဒါတစ်ခုက full version ဖြစ်ဖို့ကတေ့ာ crack ထဲမှာပါတဲ့ dll လေးကို exe ဖိုင် location ထဲကိုထည့်ပေးပါ။ပြီးရင်ဆော့ဝဲလ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ regestry key တောင်းတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ name , company name နဲ့ key ကြိုက်တာသာရိုက်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ full version အဖြစ် အသုံးပြုလို့ရပါပြီခင်ဗျာ။
cdma အတွက် ခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ Root လုပ်ဖို့ အတွက် သူငယ်ချင်းအားလုံးကို MMSD ကနေပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။
ဒီ Tool လေးကတော့ C8813D နဲ့ Y300C တို့အတွက်သီးသန့်လုပ်ထားတဲ့ Root Tool လေးဖြစ်ပါတယ်….
Read more... 10 comment
Kaspersky Mobile Security v9.10.141 For Android (Updated:March 20, 2013)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Kaspersky ဆို အားလုံးသိကြပါတယ်... Android အတွက် Kaspersky Mobile Security v9.10.141 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kms ကို Click ပြီး Google Play မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast မှာ တင်ပေးထားပါတယ်...
USB drive ကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ပက်ဝက်ချထားနိုင်မဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ မိမိစက်ထဲက ဒေတာတွေကို မိမိမသိပဲ usb ကနေ ယူလို့မရအောင်လည်းတားစည်းနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်။ System တွေအနေနဲ့ကတော့ Windows 2000/ Windows XP / Windows Vista / Windows 7.0မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Full version လေးအနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ရအောင် patch ဖိုင်လေးလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ အသေးစိပ်သိလိုလျှင် www.newsoftwares.net/usb-secure/ ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်...
Windows 8 Transformation ကတော့ window 7,Vista နဲ့ window xp ကို ၀င်းဒိုး ၈ ရဲ့ အသွင်းမျိုးလေးဖြစ်အောင် ပြောင်းလည်းပေးမဲ့ pack လေးပါ။ ပြောင်းလဲပြောင်းနိုင်မဲ့ အရာတွေကတော့ Windows 8 Boot Screen, Login Screen, Themes, Wallpapers, Icons, Sounds, Fonts, Metro UI, Aeros Auto-Colorization, Taskbar UserTile နဲ့ အခြားသောအရာတွေပါ။ စမ်းသပ်အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Internet Download Manager 6.15 Build7Final ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman615.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး 6.15 Build7လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... IDM မှာမပါတဲ့ apk ကဲ့သို့သော အခြား Files Types တွေကိုဒေါင်းစေချင်ရင် ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast, Dropbox နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
Samsung က အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဖုန်းလေးပါ s2 ကိုနဲလေးပြင်ဆင်ပြီးထွက်လာတဲ့ဖုန်းလေးပါ။ ဘာတွေပိုကောင်းလဲတော့သိဘူးနော် cpu အမျိုးအစား မတူဘူးလို့ကြားပါတယ် ပါဝါစား ပိုသက်သာပါ့မယ်။ NFC ပါလာတယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ Root လုပ်နည်းလေးတွေ့လို့ ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။
Read more...4comment
ဒီဖုန်းလေးရဲ့ Root လုပ်နည်းလေးကတော့ အသိတစ်ယောက်က ဖုန်းဝယ်ပြီး root လုပ်လို့ မရသေးဘူးပြောလို့ ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ သိပ်အခက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ လုပ်နေကြပုံစံလေးအတိုင်းပါပဲ။ လိုအပ်တာတွေ ဒေါင်းလုပ်ကြမယ်နော်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Corel Draw ဆိုအားလုံးသိပြီးသားပါ Corel Draw X6 v16.1 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အသေးစိပ်ကို http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4260069&cid=catalog20038&segid=5700006&storeKey=us&languageCode=en#tab3 မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်... လိုင်စင်အတွက် Keygen ပါဝင်ပြီး Sharebeast, Dropbox, Zippyshare သုံးနေရာတင်ပေးထားပါတယ်... အသုံးပြုနည်းစာအုပ်ကိုတော့ Ebook ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရှာနိုင်သလို ကွန်ပျူတာဖြင့် ဖန်တီးမှု အနုပညာ CorelDRAW Art Design X4 - သန်းထိုက် (ရွှေရိပ်) >>> http://pyaybloggerebook.minus.com/levBPxOpqFs0A <<< CorelDRAW Art Design X4 - Aung Myint (M.E., AUSTRALIA) >>> http://pyaybloggerebook.minus.com/lbmPROrnPWMVr7 <<< မှာလည်း ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်.... အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ...
Yamicsoft ကိုထုတ်တဲ့ window8 အတွက် manager ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ system utility ဆော့ဝဲလ်လေးလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်။ click တစ်ချက်ထဲနဲ့ ဖိုင်တွေရှင်းလင်းပေးမယ် ကွန်ပျူတာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့ function တွေလည်းပါပါတယ်။ window အတွက် လိုအပ်မဲ့ app တွေကိုလည်း Update လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းအားလုံး အသုံးပြုဖူးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါခင်ဗျာ။ virus,malware နဲ့ threats တွေကိုရှာဖြွေ့ပီး ရှင်းလေးပေးမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ နောက်ထပ် ၀င်မလာနိုင်အောင်လဲကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကို ရှာဖွေမှုပြုလုပ်ပေးပြီး ပြင်ဆင်ပေးပြီးသွားရင်တော့ ကွန်ပျူတာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးလို့ စိတ်ကျေနပ်မှုရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်က အသစ်ရှာဖွေမှုပြုလုပ်ပေးနိုင်မဲ့ အဖျက်သမားတွေရဲ့ စာရင်းကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
zte phone တော်တော်များများ moden unlock လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ ပြည်ပက၀ယ်လာတဲ့ဖုန်းတွေ ဖုန်းလိုင်းသုံးမရလို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။ အသုံးပြုနည်းလေးကတော့ သူငယ်ချင်းများစမ်းသပ်ပြီး အသုံးပြုကြပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဆိုက်မှာ အသုံးပြုပုံရေးမထားလို့ မပြောပြနိုင်တာကို နားလည်ပေးပါခင်ဗျာ။
recover လုပ်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပါပဲခင်ဗျာ။ မှားဖျက်မိတဲ့ဖိုင်တွေနဲ့ format ရိုက်ထားတာတွေကိုပြည်လည်ဆည်ယူလို့ရပါတယ်။ သုံးရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ် ။အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။
ဆော့ဝဲလ်အသစ်ကလေးပါ Skype ပြောနေရင်း အသံဖမ်းထားချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။ full auto မှာထားပြီးအသုံးပြုလို့လဲရပါတယ်။ ဖမ်းယူမဲ့အသံ format တွေကို wav ရော mp3 နဲ့ပါ ဖမ်းယူလို့ရပါတယ်။ Skype, Google talk, Yahoo Messenger and another VoIP applications sofware တွေကို အထောက်အပံ့ပေးထားပါတယ် ။သူငယ်ချင်းများအောက်ကလင့်လေးကဒေါင်းယူပြီး စမ်းသပ်အသုံးပြုကြပါခင်ဗျာ။
Htoo Thingyan 2013 android အတွက်ပါ သင်္ကြန်ကို ကြိုတင်ရင်ခုန်ဖို့
Android ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူတွေ အတွက် အတာသင်္ကြန်အငွေ့အသက်ကလေးတွေပါတဲ့ ဖုန်းဆော့ဝဲလ်လေးဖြစ်တာကြောင့် သင်္ကြန်မရောက်ခင် ကြိုရင်ခုန်လိုသူတွေအတွက်ပါ ..ချစ်စဖွယ်ကာတွန်းဇာတ်ကောင်လေးတွေနဲ့ ရယ်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းအောင်ရေးသားထားသူက ကိုရွှေထူး(ပြည်) ဖြစ်ပြီး …ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို Zwenexsys Int’l Ltd ကနေ google play မှာ ဖြန့်ချိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
Galaxy S advance GT-I9070 4.1.2 ကနေ 2.3.6 ကိုပြန်ဆင်းမယ်
2.3.6 သို့ပြန်ဆင်းဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ 4.1.2 တင်တုန်းကလို လွယ်လွယ်နဲ့တော့မရပါဘူး
ဖုန်းတွေက တင်ဖို့သာလွယ်တာပါ ခင်ဗျာ ဆင်းဖို့ဆိုရင်တော့။ နဲနဲလေးတော့ စားပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကိုအရင်ဒေါင်းပါ။ odin ရော ဆင်းရမဲ့ဖိုင်သုံး file လုံးပါပါခင်ဗျာ။ odin 3v1.85 နဲ့ အရင်လုပ်ပါခင်ဗျာ။
မိမိဖုန်းကို Settings > Developers option to enable USB Debugging နဲ့ enable Unknown source in Settings > Security လုပ်ထားလိုက်ပါ။ ကွန်ပျူတာမှာတော့ လိုအပ်တဲ့ driver သွင်းထားဖို့လိုပါတယ်။ display sleep time ကိုတော့ 10 မိနစ်လောက်ပေးထားပါ။ ပြီးရင်တော့ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ပြီး ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ကို ဖြည်ထုတ်ပြီး အထဲမှာပါတဲ့ Runme.bat ဖိုင်လေးကို double click နှိပ်ပြီး run ပေးလိုက်ပါ။ ရွေးခြယ်ဖို့ တတ်လာရင်တော့ (3)New Xperia Root by Goroh_kun ကိုရွေးပေးပြီး enter နှိပ်လိုက်ပါ။ဖုန်းမှာ restore data ပေါ်လာရင်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
မိမိ နားမလည်သော ဘာသာစကားများကို ပြောင်းပေးမဲ့ apk လေးပါ ။ အသံထွက်လေးပါ နားထောင်ကြည့်လို့ရပါတယ် သူသူငယ်ချင်းများရဲ့ ဖုန်းပေါ်မှာ အလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရအောင်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ apk လေးပါ နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းလေးလဲဖြစ်ပါတယ် ။ ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါခင်ဗျာ။
Smart Screen Off PRO v2.3.2 For Android (Updated : Mar 18, 2013)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Android မှာ Screen off လုပ်တဲ့အခါ အထာကျကျလေးနဲ့ ဒီဇိုင်းဖန်တီးနိုင်တဲ့ Smart Screen Off PRO v2.3.2 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ နမူနာပုံလေးတွေကို ကြည့်လိုက်လျှင် သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် https://play.google.com/store/apps/details?id=it.android.smartscreenoffpro ကို click ပြီး Google Play မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast မှာ တင်ပေးထားပါတယ်....
Gallery Lock Pro v1.3 For Android (Updated : Mar 16, 2013)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ဒါကတော့ သူများမကြည့်စေချင်တာ မသိစေချင်တာ မလုပ်စေချင်တာတွေကို Lock လုပ်ပြီး ပိတ်ပင်တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ Gallery Lock Pro v1.3 For Android ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... https://play.google.com/store/apps/details?id=mig.app.gallery_pro ကို Click ပြီး Google Play မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်... အားလုံးသိပြီးသားလေးမို့ အသုံးပြုလိုတဲ့ ဘော်ဒါများအတွက် sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်....
Sidebar Pro v3.5.0.0 (Android) Updated : Mar 17, 2013
Sony Xperia P LT22i 6.1.1.B.1.54 or 6.1.1.B.1.75 root